Home Wararka Wiil Soomaali ah (Qaasim Busuri) oo loo dhaariyay golaha dagaanka ee magaalada...
Wiil Soomaali ah (Qaasim Busuri) oo loo dhaariyay golaha dagaanka ee magaalada Saint Paul
Qaasim Busuri oo ah wiil dhalinyaro ah oo Soomaali Ameerikaan ah ayaa shalay loo dhaariyay xilka xubin kamid ah golaha dagaanka ee magaalada Saint Paul ee gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka. Waxaa uu ahaan jiray maamulaha misaajadka Dacwo ee ku yaalla halkaasi.
Qaasim isagoo ardey ah ayuu bilaabay barnaamijyo iskaa wax u qabso ah oo uu bulshada ku caawinayay isla markaasna soo noqday la taliyaha arrimaha ammaanka maamulka magaalada Saint Paul.
Waxaa uu hoggaamin jiray barnaamijyada waxbarashada ee ka socda gudaha misaajidka halkaas oo ay ku taxan yihiin dhalinyaro badan.
“Guushan waxaa iska leh dadkiina, guul Soomaali leedahay waaye, maadaama Soomaalida ay degan tahay Saint Paul, guryo aan ku leenahay,ganacsi aan ku leenahay, wax badan aan kusoo kordhineyno horumarka magaalada” ayu BBC u sheegay Busuri markii xilka loo dhaariyay.
Sheekh Xasan Jaamici oo ah Imaamka misaajidka Dacwa oo uu horey mas’uul uga soo ahaa ninkan la doortay ayaa sheegay in markii ugu horreysay taarikhda Mareykanka nin mas’uul ka ah misaajid uu kamid noqdo madaxda sare ee magaalada Saint Paul.
Waxaa uu sheegay in Busuri uu taasaale wanaagsan u yahay dhalinyarada ka shaqeyneyso horumarka bulshada muslimka ah.
“Waxaa hoos imaanaya in ka badan 300,000 qof oo ku nool magaalada, wuxuu madax ka noqonaya degmada lixaad oo uu guddoomiye toos ah u yahay, degmadaasina waxaa degan 50,000 oo qof” ayuu yiri Sheekh Xasan Jaamici.
Qaar kamid ah shacabka soomaaliyeed ee ku nool Saint Paul ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin xilka loo dhaariyay Busuri.
Mas’uuliyiin Soomaali ah ayaa horey xilal loogu doortay Minnesota, mana dhicin inuu dhaariyo sheekh Soomaali ah balse Qaasim Busuri waxaa kitaabka Qur’aanka ku dhaariyay Sheekh Xasan Jaamici.
“Dabcan, horey waxaan u helnay Ilhan Cumar,Maxamed Nuur,Cabdi Warsame ..gabar Hodan la yiraahdo , laakin nasiib darro ma aanan arkin Imaam soomaali ah oo dhaarinaya” ayuu yiri Maxamed Cali oo kamid ah soomaalida deggan Saint Paul.
Qaasim Busuri ayaa horaan ahaa madaxa howlaha xuquuqda aadanaha iyo u sinnaanta fursadaha ganacsiga ee magaalada Saint Paul, oo ka tirsan gobolka Minnesota.
Nusuri ayaa sheegay in xilkaas uu u soo magacaabay duqa magaalada, uuna yahay fursad wanaagsan oo uu horumar ku gaarsiin karo arrimaha xuquuqda aadanaha iyo ganacsiga.
Dadka Soomaaliyeed oo meelo badan oo dunida ka tirsan qaxootinimo ugu hayaamay ayaa Jiilalkii ayagoo da’ yar qurbaha galay waxay iminka xilal siyaasadeed ka hayaan waddamo ay ka mid yihiin Canada, Yurub iyo Maraykanka.